အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေကို လေဆိပ် လမ်း ပြုပြင်ရေးမှာ သုံးစွဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကြုံတွေ့ရင် သုံးစွဲဖို့ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထဲက ကျပ်သန်း ၂ ထောင်ကျော်ကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက နေပြည်တော်လေဆိပ် အဝင်လမ်း ပြုပြုင်မှုမှာ သုံးစွဲလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ဝန်ကြီးဌာနတွေက သုံးထားတဲ့အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးဖို့ သမ္မတက လွှတ်တော်ကိုပေးပို့တဲ့ သဝဏ်လွှာမှာ ဖေါ်ပြထား တဲ့အကြောင်း နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူက RFA ကိုပြောပါတယ်။
“အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေက တကယ့် အရေးပေါ်ကာလတွေပေါ့လေ၊ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ရင် သုံးရမယ့်ငွေကို နေပြည်တော် လေဆိပ်အဝင်လမ်းအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးက သုံးစွဲလိုက်တယ်၊ အဲဒါကို သမ္မတရဲ့ သဝဏ်လွှာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာပေါ့၊ နေပြည်တော် လေဆိပ် အဝင်လမ်းရဲ့ အဝိုင်းပတ်လမ်းတွေ ထောင့်ချိုးဖြစ်လို့ ဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ လေဆိပ်အဝင်လမ်းခင်းခြင်း ဆိုပြီးတော့မှ ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၂၆၂ ကို သုံးစွဲထားတာဖြစ်တယ်၊ အများဆုံးသုံးစွဲတာ၊ အဲဒါတွေက အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေနဲ့ ဘာမှမကိုက်ညီဘူး”
အဲဒီသဝဏ်လွှာအရ တခြားဝန်ကြီးဌာနေတွေရဲ့ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှု ဖေါ်ပြထားရာမှာ ဧရာဝတီတိုင်း အင်္ဂပူမြို့နယ်မှာ မြစ်ကမ်းပါးပြိုလို့ ဒေသခံတွေကို နေရာပြန်ချပေးတာ၊ ပဲခူးတိုင်းနဲ့ နေပြည်တော်ကောင် စီဒေသမှာ သဘာဝဘေးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆည်မြောင်းတွေ ပြုပြင်တာတွေ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေအဖြစ် သုံးစွဲလိုက်တဲ့ စုစုပေါင်းပမာဏက ကျပ်သန်းပေါင်း ၂ သောင်းခွဲကျော်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Former Military Government used to do like this, just one thing we have to praise them coz they declare even after using this money by their decision (actually they did the similar way as b4). All 2/3 of amount will go to the person who had chance to manage this money. Yah, very nice Democracy which forwarding as so-called Myanmar Way.
ပြည်သူ/သားတွေအတွက်လျာထားသောအရေးပေါ်ငွေကိုကြိုတင်မပြောပဲ သုံးပြီးမှပြောတယ်။ ဒါ ဒီမိုကရေစီလား ကြံဖွတ်ဒီမိူကရေစီစံနစ်လား ❓နိင်ငံတကာဒီမိူကရေစံနစ်က မသုံးခင် လွတ်တော်မှာအရင်တင်ရတယ် နေပြည်တော်လေဆိပ်ပြင်ပြီးမှသန်း၂၂၆၂သုံးပြီးမှပြောမနေနဲ့
Jan 29, 2014 09:58 PM
ပြည်ပတိုင်းပြည်တချို့လို အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အခွန် (Property tax) ဆိုတာကို အိမ်တန်ဘိုးအလိုက် အိမ်ရှင်တွေဆီက ကောက်ပြီး မြို့စည်ပင်သာယာ အရေးတွေ အတွက် သုံးသင့်ပါတယ်။ လမ်းပြင်တာ၊ လမ်းမီးတိုင်၊ လမ်းဘေး သစ်ပင် ပန်းမာလ် စိုက်ပျိုးတာ အစပေါ့။ နေပြည်တော်က သူဌေးမြို့ပဲ။ သည် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း ဟိုတယ်ကြီးတွေ ဆိုင်ကြီးတွေဆီက အခွန်အခ ကျသင့် သင့်တာကို (တကယ်) ကောက်ခံပြီး ထိုရရှိငွေနဲ့ ပြင်ကြ၊ ဆင်ကြ၊ နေကြပေါ့။ ကျန်တာ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ငွေကို မထိကြေး။
Jan 29, 2014 03:26 PM
“ဤပုံကို ကြည့်ပါ။ အဝေးက မြင်နိုင်ပါ၏ ”
ပုံထဲမှာ လမ်းပြင်နေတာ (၃ယောက်)တည်းရဲ့ လုပ်အား ၊ လက်အား ဖြစ်နေပေလို့ ကျပ် သန်း ၂၀၀၀ ပဲ ကုန်တာ။ စက်အားများများ လူအားများများနဲ့သာဆိုရင် “အရေးပေါ်” ကနေ “အရေပေါ် ၊ အရိုးမြင် ၊ မျက်ဖြူလန်” ဖြစ်သွားနိုင်
Jan 28, 2014 10:57 PM
အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အသူံးစရိတ်တွေဟာ ဘယ်ငွေစာရင်းထဲက
ဖြစ်ဖြစ် ခွင့်တောင်းပြီးမှ ၊ သင့်မသင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှ သုံးခွင့်ချပေးရမှာ။ ခုဟာက “အရေးပေါ်”အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလေ။ အရေးပေါ် မဟုတ်ရင် လုံး၀ မသုံးသင့်ဘူးပေါ့။